Ho an’ny teny Andravoahangy ohatra dia nahatratra 41 ireo olona tsy nanana arotava mihitsy raha 43 nanana ihany fa tsy nametaka izany. Teny Ambohimanarina indray dia niisa 74 ireo tsy nanana aron-tava raha 11no nanana saingy entin’ilay tsy fahazarana ka tsy nametaka izany. Teny Isotry kosa indray dia 39 no tsy nanana arotava raha 52 ireo nanana fa ninia tsy nanao. Teny amin’ny 67 ha indray dia 14 isa ireo nitaraina fa tsy nanana raha 51 isa no nanana fa tsy nanao. Ho an’ny teny Anosibe kosa dia niisa 57 ireo tsy nanana aron-tava. Teny Analakely indray miisa 30 ireo tsy nanana . Ho an’ny Analamahitsy indray dia nahatratra 5 ireo tsy nanana aron-tava raha 15 nanana ihany saingy ninia tsy nametaka izany. Noho ny tsy fahazarana moa amin’ny ankapobeny no manosika ny olona tsy hanao aron-tava. Na izany aza anefa dia tokony hizatra ihany ny rehetra ho fitandroana ny fahasalamana.